Qarax Khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Newyork ee Maraykanka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Qarax Khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Newyork ee Maraykanka.
On Dec 12, 2017 178 0
Qof muslim ayaa qarax ka geystay xaafadda Manhatan ee magaalada Newyork, sida ay sheegayaan warbaahinta Maraykanka iyo kuwa Caalamka.
Qofka qaraxa geystay ayaa lagu soo waramayaa in bambo gacan ku sameys ah islamrkaana aan sidaas u weyneyn uu ku qarxiyay laamiga weyn ee xaafadda Manhatan, wuxuuna qaraxu geystay waxyeello kala duwan.
Ugu yaraan 4 Ruux ayaa dhaawcyo soo gaaray, oo uu ku jiro ruuxa weerarka fuliyay, sida ay warbaahintu sheegayaan, waxaana laamaha Amaanka ay sheegeen in weerarkan uu ahaa fal “Argagaxiso oo aan guuelysan”.
TV-GA CNN ee Maraykanka oo soo xiganaya baarayaal katirsan laamaha Amaanka ayaa sheegay in ruuxa weerarka fuliyay uu sheegay inuu howlgalkan u fuliyay isagoo ka xun falalkii ugu dambeeyey ee Yahuudu ku duqeeyeen magaalada Qazza, taas oo ay ku dhaawacmeen 15 Ruux oo wiil dhallaan ah uu ku jiray.
Qal-qal iyo cabsi ayaa laga dareemay magaalada Newyork, markii uu qaraxu dhacay kadib, waxaana la arkayay Booliis taagan wadooyinka magaalada.